စံ-ဇာဏီဘို ရဲ့မော်ဒန်ဗေဒင်(နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်မှ ၁၅ ရက်အထိ ) – Myanmar Magazine
စံ-ဇာဏီဘို ရဲ့မော်ဒန်ဗေဒင်(နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်မှ ၁၅ ရက်အထိ )
November 13, 2018 myanmarmagazine	ဗေဒင်
ဦးတည်ချက်ပြောင်း၍ လုပ်ကိုင်ခြင်းမှ အဆင့်မြင့်တက်လမ်း ရရှိ မည်။ ကိုယ်တိုင်တွင်လည်းကောင်း၊ မိသားစုတွင်လည်းကောင်း ပြည်ပနှင့် ဆက်နွှယ်သော အကျိုးကောင်းများ ရရှိမည်။ နေရာအပြောင်းအလဲနှင့် တိုးတက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်မည်။ ဆောင်ရွက်ထားသောကိစ္စများ နောက်ဆုံး ချိန်ရောက်ခါမှ တလွဲတချော်ဖြစ်မည်။ ယတြာ ။ ။ အင်္ဂါနေ့တွင် ဆေးဝါး အလှူဒါနပြုပါ။
ရည်ရွယ်ချက် အောင်မြင်မည်။ အခက်အခဲများ ကျော်လွှားနိုင်မည်။ လူမျိုးကွဲ အကျိုးပေးမည်။ ရန်အတိုက်အခံများနှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရန် ကြုံမည်။ ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီး ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ခြင်းတို့မှ ကောင်းသော အကျိုးဆက်ရရှိမည်။ ကာလရှည်ကြာ ကြိုးစားဆောင်ရွက်ထားသောကိစ္စ တို့မှ အောင်မြင်မှုအကျိုးဆက်ကို ရရှိမည်။ ယတြာ ။ ။ သောကြာနေ့တွင် သစ်ဆွေးများ ရှာဖွေစွန့်ပစ်ပါ။
ရန်အနှောင့်အယှက်များ ဝန်းရံနေသည်။ အတိုက်အခံများနှင့် ရင်ဆိုင် ရမည်။ စကားမတည်သူများနှင့် တွေ့မည်။ ကိုယ်တိုင်လည်း တစ်ပါးသူအ ပေါ် စကားတည်ရန် ခဲယဉ်းမည်။ စာရွက်စာတမ်း လက်ပြောင်းလက်လွှဲ ကိစ္စမှန်သမျှ သတိနှင့်ဆောင်ရွက်ပါ။ အရောင်းအဝယ်ကိစ္စများ အလော တကြီး မဆောင်ရွက်ရ။ ရောင်းမှားဝယ်မှား ဖြစ်တတ်သည်။
ယတြာ ။ ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ယပ်တောင်ဟောင်းများ စွန့်ပစ်ပါ။
ဘဝအပြောင်းအလဲရှိမည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်သစ်များ ချမှတ်နိုင်သည်။ လမ်းသစ်ထွင်၍ ဆောင်ရွက်မှုများ အောင်မြင်မည်။ ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်၍ လက်တွေ့လုပ်သောအလုပ်တို့သည် စိတ်ကူးထားသည်ထက်ပို၍ အောင် မြင်မည်။ လူသစ်၊ ဝန်းကျင်သစ်နှင့် ဆက်ဆံရမည်။ ယတြာ ။ ။ တနင်္လာ နေ့တွင် ကျောက်ကျော ဆွမ်းတော်တင်ပါ။
မလုပ်တော့ဟူ၍ ယတိပြတ်ဆုံးဖြတ်ထားသော လုပ်ငန်းများ ပြန် လည် လုပ်ကိုင်ရမည်။ ပြဿနာဟောင်းများ ပြန်လည်ဖြေရှင်းရမည်။ ပြန် လည် ဆုံစည်းရန် မဖြစ်နိုင်တော့ဟု သတ်မှတ်ထားသောသူနှင့် ဆုံစည်း မည်။ မိမိဝန်းကျင်တွင် အသက်သေဆုံးမည်ဟု ထင်မှတ်ရသောသူ ပကတိ ပြန်လည် ကျန်းမာလာမည်။ ဆေးစစ်ချက်အရ ရောဂါမရှိဟု သတင်းကြား ရမည်။ ယတြာ ။ ။ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် အုန်းသီးစိတ် ဆွမ်းတော်တင်ပါ။
အရေးပါသောစာရွက်စာတမ်းများ လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။ အလုပ် နှစ်ခု တစ်ပြိုင်နက်တည်း လုပ်ကိုင်ရမည်။ အပြောင်းအလဲနှင့် တိုးတက်မှု များ ပူးတွဲဖြစ်ထွန်းမည်။ အရပ်ဝေး နိုင်ငံရပ်ခြားနှင့် ဆက်စပ်သော အလုပ် များ အဆင်ပြေမည်။ ကိုယ်တိုင်တွင်လည်းကောင်း၊ မိသားစုတွင်လည်း ကောင်း အလုပ်အကြံအစည် အောင်မြင်မည်။ ယတြာ ။ ။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် လိမ္ဗော်သီး ဆွမ်းတော်တင်ပါ။
ရှေ့ဆက်တိုးရန် လမ်းစပျောက်၍ နောက်ပြန်ဆုတ်ရန် ခက်ခဲသော အနေအထားရှိမည်။ ရပ်တန့်နေမည့်အစား ရသမျှ ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ပါ။ တစ်ပါးသူပြုမူထားသော ပြဿနာအခက်အခဲများကို ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး သ ဖွယ် ထမ်းဆောင် ဖြေရှင်းရလိမ့်မည်။ အခြားသူများ တားဆီးနေ သည့် ကြား မှ တစ်ဇ∑တ်ထိုး ရှေ့တိုးလုပ်ကာ အရှုံးကြုံပြီးမှ ထူးခြားမည်။
ယတြာ ။ ။ သောကြာနေ့တွင် ပဲကုလားဟင်း ဆွမ်းလောင်းပါ။
ဗြိစÍာရာသီ(အောက်တိုဘာ ၂၄ မှ နိုဝင်ဘာ ၂၂)
အဆိုးအညံ့များကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပြီး ကောင်းသောကံပွင့်မည်။ အ ရေးပါသော ကတိစကားများ ပြောဆိုဆောင်ရွက်ရမည်။ လူမျိုးကွဲ အကျိုး ပေးမည်။ အရပ်ဝေးနှင့်ဆက်စပ်ပြီး လုပ်သောလုပ်ငန်းတို့မှ အဆင့်မြင့် တိုးတက်မှုများဖြစ်ပေါ်မည်။ အပြိုင်အဆိုင်များကို ကျော်လွှားပြီး ထူးခြား သော အောင်မြင်မှုများ ရရှိမည်။ အတတ်ပညာနှင့် တိုးတက်မှုများရမည်။ ယတြာ ။ ။ အင်္ဂါနေ့တွင် ဆန်ကြဲပက်၍ ကြက်ငှက်အစာကျွေးပါ။
အလှူမင်္ဂလာကိစ္စများ ပါဝင်ပတ်သက်ရမည်။ မေတ္တာရေးကံကောင်း မည်။ အပြိုင်အဆိုင်အားလုံးကို ကျော်လွှားနိုင်ပေမည်။ မိတ်ကောင်းဆွေ ကောင်း တိုးပွားမည်။ စုပေါင်းလုပ်ငန်း အကျိုးပေးမည်။ ပညာအတတ်နှင့် တိုးတက်မှုများ ရရှိမည်။ ကိုယ့်ကိစ္စထက် သူတစ်ပါးကိစ္စများ ဦးစားပေးရ လိမ့်မည်။ အခါတိုင်းထက်ပို၍ ငွေဝင်မည်။ ယတြာ ။ ။ ကြာသပတေးနေ့ တွင် ဖန်ကွဲများ ရှာဖွေစွန့်ပစ်ပါ။
ကာလရှည်ကြာ လူပင်ပန်း စိတ်ပင်ပန်းခံ၍ ကြိုးစားအားထုတ်ထား သည်တို့၏ ကောင်းသောအသီးအပွင့်များ ပိုင်ဆိုင်ခံစားရမည်။ ဘဝအခြေ အနေ အဆင့်မြင့်မားတိုးတက်ရန်အတွက် ပေါ်ထွန်းလာသော အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို လက်တွေ့အသုံးချ၍ အဆင့်မြင့်သော တက်လမ်းများ ပေါ် ထွန်းမည်။ ယတြာ ။ ။ စနေနေ့တွင် တံခွန်တစ်လက် ဘုရားကပ်လှူပါ။
ကုံရာသီ (ဇန်နဝါရီ ၂၁ မှ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈)
ခရီးသွားရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်းများ အဆင်ပြေမည်။ လုပ်ရိုးလုပ် စဉ် မဟုတ်သော အလုပ်ကိစ္စပိုများ ဆောင်ရွက်ရန် အခြေအနေကြုံမည်။ မူလစီစဉ်ထားသည်နှင့် လက်တွေ့ဆောင်ရွက်မှုများ ကွာဟမည်။ ငွေကြေး အပေးအယူကိစ္စများတွင် သတိနှင့်ဆောင်ရွက်ပါ။ အချိန်ယူပြီး စဉ်းစားလေ အမှားကြုံမည်။ ယတြာ ။ ။ စနေနေ့တွင် ဖိနပ်အပြတ်များ ရှာဖွေစွန့်ပစ်ပါ။
အလိုအလျောက် စိတ်တိုဒေါသထွက်မည်။ ရန်ပဋိပက္ခများ ဖြစ်တတ် သည်။ မူလရည်မှန်းထားသည်ကတစ်မျိုး၊ လက်တွေ့တစ်မျိုးဖြစ်မည်။ စီမံ ကိန်း ချ၍ မရ။ တစ်ပိုင်းတစ်စဖြစ်သောကိစ္စများကို အဆုံးသတ်ရမည်။ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ထားသည်များကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော် ရမည်။ ယတြာ ။ ။ ကြာသပတေးနေ့တွင် ပန်းအဖြူငါးပွင့် ဘုရားကပ် လှူ ပါ။
← ချစ်သူကို မပြောသင့်တဲ့ စကား (10) ခွန်း
နတ်တလင်းဖျော်ဖြေပွဲစီစဉ်သူ မဖြေရှင်းပေးပါက အမှုဖွင့်မည်ဟု သားငယ်ရှင်း →
ဘ၀မှာ ကံဆိုးနေတယ်ဆိုသူများအတွက် ကံဆိုးမိုးမှောင်တွေ လွင့်ပြယ်စေမည့် အဓိဌာန် !!!
December 1, 2018 myanmarmagazine Comments Off on ဘ၀မှာ ကံဆိုးနေတယ်ဆိုသူများအတွက် ကံဆိုးမိုးမှောင်တွေ လွင့်ပြယ်စေမည့် အဓိဌာန် !!!
December 30, 2018 myanmarmagazine Comments Off on ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအတွက်”၂၀၁၉”ခုနှစ်အတွင်း ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် ၁နှစ်စာ ဟောစာတမ်း
၇ရက်သားသမီး တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်
September 20, 2018 myanmarmagazine Comments Off on ၇ရက်သားသမီး တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်